माओवादी र कांग्रेसद्वारा आपना उम्मेदवारलाई सघाउन एमाले, मधेसी र साना दलसँग आग्रह | नेपाल इटाली डट कम
माओवादी र कांग्रेसद्वारा आपना उम्मेदवारलाई सघाउन एमाले, मधेसी र साना दलसँग आग्रह
August 27, 2011 — nepalitaly
डा. बाबुराम भट्टराई पहिलो पटक उम्मेदवार भएका हुन्, रामचन्द्र पौडेल तेस्रो पटक उम्मेदवार भएका हुन्, उनले यसअघि १६ पटकसम्म चुनाव हुँदासमेत जितेनन्
मधेसी मोर्चामा विवादः गणतान्त्रिक फोरम, तमलोपा नेपाल र सद्भावना माओवादीको पक्षमा, लोकतान्त्रिक फोरम र तमलोपा कांग्रेसको पक्षमा
फोरम, संघीय सद्भावना र साना दलले कुनै निर्णय गरेका छैनन्
व्यवस्थापिका-संसद्मा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आइतबार हुने निर्वाचनमा माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । दुवैजनाले शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने दुवैको दाबी छ ।
संसद् सचिवालयले शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसमक्ष उम्मेदवारी दर्ता गर्न समय तोकेको थियो । सचिवालयले तयार गरेको निर्वाचन तालिकाअनुसार साढे ४ बजे उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
माओवादी उम्मेदवार डा. भट्टराईले दिउँसो करिब सवा ११ बजे सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका वरिष्ठ नेता तथा सभासद्हरू उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगेका थिए । डा. भट्टराईको प्रस्तावकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र समर्थकमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र महासचिव रामबहादुर थापा बादल छन् ।
त्यस्तै, दिउँसो करिब साढे १२ बजे दलबलसहित सिंहदरबार पुगेर पौडेलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनको प्रस्तावकमा महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र समर्थकमा केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि छन् । पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा कांग्रेस नेताहरू र केही सभासद् संसद् सचिवालय पुगेका थिए ।
संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल
तस्बिरः ज्ञानेन्द्र कार्की/नयाँ पत्रिका
दुवै उम्मेदवारले आफू निर्वाचित हुने दाबी गरेका छन् । डा. भट्टराईले शान्ति र संविधान निर्माण आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको बताएका छन् । पौडेलले भने शान्ति र संविधानसँगै दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका छन् । दुवै उम्मेदवारले बहुमतीय प्रतिस्पर्धाभित्र पनि सहमतीयको खोजी भइरहेको बताएका छन् ।
‘शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याई संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकताको हो । हाम्रो उम्मेदवारी त्यसैका लागि हो,’ उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि डा. भट्टराईले पत्रकारसँग भने ।
दलहरूसामु शान्ति र संविधानलाई टुंगोमा पुर्‍याउने यो अन्तिम मौका भएकाले बहुमतीयभित्र पनि सहमतिको खोजी गरिने भट्टराईले बताए । आफ्नो पार्टीले शान्ति र संविधान निर्माणबारे अघि सारेको अवधारणामाथि छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने उनको भनाइ छ । अन्य दलहरूले आफूलाई सहयोग गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेलले पनि एमालेलगायत अन्य दलकोे समर्थन आफूले पाउने जिकिर गरे । शान्ति र संविधान अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै त्यसमा केन्दि्रत हुने उनले बताए । ‘मुलुकले अहिले खोजेको शान्ति र संविधान निर्माण, दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासन होे । मेरो प्राथमिकतामा पनि तिनै विषयहरू छन्,’ उम्मेदवारी दर्तापछि पौडेलले भने ।
एमाले, मधेसी मोर्चा तथा अन्य साना दलसँग छलफल भइरहेको र उनीहरूले आफूलाई समर्थन गर्ने दाबी पौडेलले गरे । माओवादीले समेत अन्तिममा उम्मेदवारी फिर्ता लिएर आफूलाई समर्थन गर्ने उनको दाबी छ ।
संसद्को आइतबार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान हुनेछ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन उम्मेदवारले कम्तीमा २ सय ९८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले संसद्मा ५ सय ९४ सदस्य रहेका छन् । दुईजना मात्रै उम्मेदवार भएकाले आइतबार नै मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना छ । यसअघि नै संसद् नियमावली संशोधन गरेर चुनाव बहिस्कार गर्न र तटस्थ बस्न नपाउने तथा सभामुखलाई जानकारी नदिईकन अनुपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सचिवालयले तयार गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार संसद् बैठकमा सबै उम्मेदवारले उम्मेदवारीको सूचना प्रस्तुत गरेपछि प्रस्तावक र समर्थकले समर्थन गर्नेछन् । त्यसपछि सबै उम्मेदवारीको सूचनामाथि सामूहिक छलफल हुने र सबै उम्मेदवारीलाई एक साथ बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । मत विभाजन प्रक्रियाबाट निर्णय लिइनेछ ।
संसद्मा सात सदस्यको पद भने रिक्त छ । सद्भावना (आनन्दीदेवी) का श्यामसुन्दर गुप्ता, चुरे भावरका केशवप्रसाद मैनाली र संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीका राजकुमार नाल्बो लिम्बूको सभासद् पद खारेज भएको छ । त्यस्तै, माओवादी सांसदहरू गौरीशंकर खड्का र रामकुमारी यादव तथा एमालेका डम्बरबहादुर खड्काको निधन भइसकेको छ । तमलोपाका तर्फबाट महोत्तरी-४ बाट चुनाव जितेका रामकुमार शर्माले माओवादी प्रवेशसँगै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
त्यस्तै, तीन सांसदलाई मतदान गर्ने अधिकार नै छैन । नेपाली जनता दलकी गायत्री साह, मधेसी जनअधिकार फोरमका बिपी यादव र एमालेका डिबी कार्कीलाई मतदानको अधिकार नै छैन । साह र यादव राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा र कार्की भ्रष्टाचारको अभियोगमा सांसद् पदबाट निलम्बित गरिएका छन् ।
त्यसैगरी माओवादी, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका एक/एक सांसद फरार छन् । राहदानी दुरुपयोगको अभियोग लागेका फोरमका सभासद् शिवपूजन राय यादव र एमालेका नारदमुनी राना फरार छन् । त्यस्तै, अर्को बिहे गरेर माओवादी सांसद गुणाकर बस्याल पनि बेपत्ता छन् । उनीहरू तीनैजना पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्न आउने सम्भावना कम छ ।
कस्ता छन् प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार ?
दस वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका माओवादी उपाध्यक्ष डा. भट्टराई समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा लोकपि्रय मानिन्छन् । भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका ५८ वषर्ीय उनी संविधानसभा चुनावमा गृहजिल्ला गोरखा-२ बाट निर्वाचित भएका हुन् । चुनावमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर -४२,२७२) उनले चुनाव जितेका हुन् । गोरखाको बेलबास उनको स्थायी ठेगाना हो ।
संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री बने । धेरै राजस्व उठाएका कारण उनी सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा चर्चामा आए । उनलाई माओवादीको ‘थिंक ट्यांक’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
विद्यार्थीकालदेखि नै पढाइमा अब्बल भट्टराई अध्ययनशील नेता मानिन्छन् । आलोचकहरू उनलाई अन्तरमुखी र अव्यावहारिक पनि भन्छन् । बौद्धिक ढंगले तर्क गर्ने, तर लचिलो हुन नसक्ने नेताका रूपमा पनि उनको अलोचना गरिन्छ । नेपाली र अंग्रेजीमा उनले धेरै पुस्तक लेखेका छन् । उनी पार्टीभित्र सधैँ अल्पमतमा रहे । अल्पमतमा हुँदा पनि शान्ति र संविधानका पक्षमा भने भट्टराई सधैँ अडिग रहिरहे ।
तनहुँको रिस्तीमा ६८ वर्षअघि जन्मिएका पौडेल कांग्रेस उपसभापति र संसदीय दलका नेता हुन् । संविधानसभा चुनावमा उनी गृहजिल्ला तनहुँकै २ नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भए । यसअघि पनि उनलाई कांग्रेसले दुईपटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको थियो । पहिलो पटक उम्मेदवार बन्दा उनले १६ पटकसम्म संसद्मा बहुमत जुटाउन सकेका थिएनन् । सत्रौँ पटकमा उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि नयाँ प्रक्रियाअन्तर्गत भएको चुनावमा पनि कांग्रेसले पौडेललाई नै उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए ।
नेपाली भाषामा स्नातकोत्तर पौडेलले राजनीतिकै क्रममा १५ वर्ष जेल जीवन बिताएका छन् । कांग्रेसभित्र उनी पनि अध्ययनशील नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनले धेरै पुस्तक पनि लेखेका छन् ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि उनी पटक-पटक लाभको पदमा पुगेका छन् । सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, स्थानीय विकासमन्त्री, गृहमन्त्री र शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्रीका रूपमा उनले काम गरिसकेका छन् ।
आलोचकहरू उनलाई सानो चित्त भएको नेता भन्छन् । सबैलाई सहमतिमा लिन नसक्ने र आफ्नै कुरा ठीक हो भन्ने अडान राख्ने गरेको आरोप उनलाई लाग्ने गर्छ । उनी कम लोकपि्रय मानिन्छन् ।
बहुमत जुटाउन दुवै दलको दौडधुप
रामशरण, नेत्र, भुवन/
प्रधानमन्त्री चुनावमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न माओवादी र कांग्रेसले एमाले, मधेसी र साना दलसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले शुक्रबार दलहरूसँगको भेटघाट तीव्र बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री चुनावमा निर्णायक मानिएको एमालेसँग माओवादी र कांग्रेसको टोलीले शुक्रबार वार्ता गरेको थियो । वार्तामा एमालेले माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियाबारे थप स्पष्ट प्रस्ताव र कांग्रेसलाई शान्तिप्रक्रियामा माओवादीको समर्थन रहने आधार ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
एमालेले शान्तिप्रक्रियामा प्रगति हुनेगरी सहमति नभए माओवादीको अहिलेको प्रस्तावका आधारमा समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ । कांग्रेसलाई भने माओवादी सरकारबाहिर हुने अवस्थामा शान्तिप्रक्रियाका काम अघि बढ्ने सुनिश्चितता प्रस्तुत गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ ।
दुवै दललाई एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा खेल्ने भूमिकाबारे शनिबार बस्ने पार्टी स्थायी समितिले निर्णय गर्ने जनाएको छ । ‘तपाईंहरूले शान्तिप्रक्रियामा अहिले ल्याएको प्रस्तावका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा समर्थन गर्न सकिँदैन भनेका छौँ,’ वार्तामा सहभागी एमाले नेता भीम रावलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘लचिलो भएर पहिले सहमति भएको लाइनमा काम हुनेगरी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुस् भनेका छौँ ।’
माओवादीले भने पहिले दलहरूबीच भएको सहमतिकै लाइनमा आफ्नो प्रस्तावलाई पूर्ण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शान्तिप्रक्रियाबारे बिहीबार सार्वजनिक प्रस्तावका विषयमा शुक्रबार बिहान एमाले नेतृत्वसँग माओवादीले औपचारिक छलफल गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका विषयमा उनीहरूले आ-आफ्ना धारणा आदानप्रदान गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्केन ।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सार्वजनिक प्रस्तावकै आधारमा माओवादीसँग मिलेर जान नसकिने बताएका थिए । ‘तपाईंहरू धेरै लचिलो हुन आवश्यक देखिएको छ, शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण सुनिश्चित गर्नेगरी लचिलो हुन सक्नुभएन भने सँगै जान सकिँदैन,’ माओवादीसँगको वार्तामा खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘लचिलो हुनसक्ने ठाउँ छन्, त्यसमा ध्यान दिन सक्नुभयो भने सँगै जान सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको वार्तामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य किरण, डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सिपी गजुरेल र पोष्टबहादुर बोगटी सहभागी थिए । एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष खनाल, वार्ताटोलीका संयोजक माधवकुमार नेपाल, सदस्यहरू केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, अशोक राई, ईश्वर पोखरेल र भीम रावल सहभागी थिए ।
कांग्रेससँग भने एमालेले शान्तिप्रक्रियामा माओवादीको साथ कसरी लिने भन्नेमा स्पष्ट हुन आग्रह गरेको थियो । कांग्रेसले माओवादी शान्तिप्रक्रियाप्रति इमानदार नरहेको र शान्तिप्रक्रियामा एमालेसँग समान धारणा रहेकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेको थियो ।
‘शान्तिप्रक्रियामा त पहिलेदेखि नै हामीबीच समान धारणा छ, माओवादी शान्तिप्रक्रियाप्रति इमानदार छैन,’ कांग्रेस नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले नेता रावलले भने, ‘आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुस् भन्ने प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको छ ।’ एमालेले भने शनिबार बस्ने स्थायी समिति बैठकबाट ठोस निर्णय लिएर पुनः छलफल गर्ने जनाएको थियो ।
शान्तिप्रक्रियामा माओवादीको प्रस्ताव दुवै दलले अस्वीकार गरेपछि एमालेले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आफूलाई सघाउनेमा कांग्रेस पनि पूर्ण रूपमा आशावादी देखिएको छ । ‘झलनाथ खनालसँगको छलफलपछि एमालेले हामीलाई सघाउँछ भन्नेमा हामी पूर्ण रूपमा आशावादी देखिएका छौँ,’ कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने, ‘मैले एक्लै वचन दिने होइन भोलि स्थायी समितिको बैठकपछि आधिकारिक जानकारी दिन्छौँ भन्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीमा पौडेलले उम्मेदवारी दिएपछि कांग्रेस नेताहरू एमालेसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री खनाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्षद्वय गौतम र राई, महासचिव पोखरेल र नेता रावल सहभागी थिए । त्यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल, नेता महत र अर्जुननरसिंह केसी सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री चुनावमा कसको पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न एमालेले शनिबार साढे १० बजे स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ । वार्ता कमिटीले प्रस्तुत गर्ने शान्तिप्रक्रिया र सरकार गठनबारे विभिन्न पक्षसँग भएका वार्ताको प्रतिवेदनका आधारमा बैठक निर्णय लिने एमालेले जनाएको छ । ‘वार्ता कमिटीले को-कोसँग कस्तो कुरा गरेको बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ र त्यही आधारमा स्थायी समितिले निर्णय लिन्छ,’ सचिव युवराज ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
एमालेले शान्तिप्रक्रियामा माओवादीको निर्णयमा चित्त नबुझाएपछि कांग्रेसको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ । विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बस्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण पनि नमिल्ने भएकाले कुनै न कुनै उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गरिने नेता रावलले बताए । ‘एमाले तटस्थ बस्दैन, कुनै न कुनै उम्मेदावरका पक्षमा मतदान हुन्छ,’ उनले भने ।
माओवादीलाई मधेसी र साना दल निर्णायक
प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सारेको माओवादीले मधेसी मोर्चा र साना दलसँग सहयोग मागेको छ । बहुमतीय प्रक्रियामा गएपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिन मोर्चा र साना दल निणर्ायक बनेका छन् ।
माओवादीले सिंहदरबारस्थित आफ्नै संविधानसभा दलको कार्यालयमा मधेसी मोर्चा र साना दलसँग शुक्रबार छलफल गरेको छ । बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार डा. भट्टराईले शान्ति र संविधान पूरा गर्ने अन्तिम मौका आएकाले यसलाई पूरा गर्न आफूलाई सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरे ।
‘नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण गर्न हामीलाई अन्तिम मौका प्राप्त छ, यसलाई पूरा गर्न बहुमतीयभित्र पसेर पनि सहमतीयमा जानुपर्छ भन्ने लागेर उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ नेता भट्टराईले भने, ‘हाम्रो पार्टीले शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी अगाडि सारेको प्रतिबद्धताका आधारमा सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।’
बैठकपछि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले नै कसलाई समर्थन गर्ने भन्नु हतार हुने बताए । ‘अहिले नै कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा हतार हुन्छ,’ उनले भने, ‘माओवादी प्रस्तावको थप अध्ययन गर्छौँ र हामी यसलाई टुंग्याउँछौँ ।’
माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा आबद्ध ११ साना दल र एक स्वतन्त्र सभासद्सँग शुक्रबार सहयोगको आग्रह गरेको थियो । बैठकमा सहभागी साना दलका केही नेताले शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी प्रस्ताव पहिला नल्याएर माओवादीले सरकारमा जानका लागि ढिला ल्याएको आरोप लगाएका थिए । कतिपय दलले माओवादी प्रस्ताव अपूरो भएको र स्पष्ट पार्न मागसमेत गरे ।
मञ्चका संयोजक एकनाथ ढकालले अन्तिम समयसम्म सहमतिको सरकार बनाउन आफूहरूले प्रयास गर्ने बताए । ‘हाम्रो प्रयास प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुको बिहानसम्म पनि जारी हुनेछ,’ ढकालले भने ।
मधेसी मोर्चामा विवाद
प्रधानमन्त्रीमा माओवादी र कांग्रेस कसलाई सघाउने भन्नेमा मधेसी दलमा विवाद छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका माओवादी र कांग्रेस तथा एमाले नेताहरूसँग द्विपक्षीय छलफल र आन्तरिक बैठकसमेत गर्दै आएका छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूका आन्तरिक बैठकमा गणतान्त्रिक फोरम, तमलोपा नेपाल र सद्भावना पार्टीका नेताहरू माओवादीलाई सघाउने पक्षमा देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक फोरम र तमलोपाका नेताहरूले भने कांग्रेसका पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँडमा माओवादी लचिलो भए समर्थन गर्नसक्ने मधेसी दलका केही नेताहरूले माओवादी नेताहरूसँग बताउने गरेका छन् । दुई सय ३७ सभासद् रहेको माओवादीलाई मधेसी दलको समर्थनमा बहुमत पुग्छ ।
स्रोतका अनुसार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीसहित जितेन्द्र सोनाल, तमलोपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरू माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउनेमा सकारात्मक छन् । उनीहरू माओवादी प्रस्तावमा मधेसीका केही मागसमेत समेटेर नयाँ प्रस्ताव बनाउने र माओवादीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो ।
तमलोपा सहअध्यक्ष त्रिपाठीले यसपटक मधेसी मोर्चाले सबै मुद्दामा गम्भीर अध्ययन र मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्ने बताए । ‘यसपटक हामीले जे निर्णय गर्छौँ, निकै सोचविचार गरेर गर्छौँ,’ उनले भने, ‘शान्ति र संविधानका लागि उपलब्धिमूलक हुने गरी हामीले निर्णय गर्नेछौँ ।’
माओवादी प्रस्ताव सकारात्मक रहेको तर थप प्रस्ट पार्नुपर्ने तमलोपा अध्यक्ष यादवले बताए । ‘शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयमा माओवादीले अरू प्रस्ट पार्नुपर्छ । उसले देखाएका प्रतिबद्धता सकारात्मक छन्,’ यादवले भने ।
मधेसी मोर्चामा आबद्ध नभएका फोरम र संघीय सद्भावना पार्टीले अझै निर्णय गरेका छैनन् । अघिल्लोपटक फोरमले माओवादीलाई सघाएको थियो ।
कांगे्रसद्वारा मोर्चासँग सहयोगको आग्रह
कांग्रेसका नेताहरूले शुक्रबार मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयमा माओवादीले गर्दै आएका प्रतिबद्धता कहिले पनि कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक पनि माओवादीलाई विश्वास गर्न नहुने कांग्रेसका नेताहरूले छलफलमा बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार बिहान नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेसँग पनि भक्तपुरस्थित उनकै निवासमा भेटेका छन् । भेटमा आफूलाई सघाउन पौडेलले बिजुक्छेलाई आग्रह गरेका थिए ।
« ‘फेसबुकले नै हो मेरो परिवार बिगारेको’
नेकपा स्थापनाको डायरी »